DF oo ka warbixisay toogashadda Xabsiga Dhexe ee Muqdisho
DF oo ka warbixisay iska-horimaadka Xabsiga Dhexe ee Muqdisho
Afar maxbuus oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa dhaliyey tacshiiradda oo haatan lasoo gabagabeeyay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xaqiijisay shaqaaqadii maanta oo Axad ah ka dhacday jeelka ugu weyn magaala madaxda Muqdisho ee loo yaqaano "Xabsiga Dhexe".
Wasaaradda Warfaafinta ayaa shaaca ka qaadey in la toogtay afar maxbuus oo isku dayday in ay ka baxsadaan jeelka, wallow aysan sharaxaad dheeriya ka bixin qaabka ay ku timid is-rasaaseynta.
Ismaaciil Mukhtaar Cumar, afhayeenka wasaaradda oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka, ayaa qiray waxyeelo - geeri iyo dhaawac - oo soo gaarey qaar kamid ah ilaaladda xabsiga.
Illo madax-banaan ayaa u dusiyey warsidaha Garowe Online in xabada uu bilaabay maxbuus bastoolad ka dafay waardiye isla markaana uu kadib bilaabay in uu toogto ilaalada kale ee xabsiga joogtey waqtigaas.
Iska-hori-imaadka oo dhowr daqiiqadood socday ayaa dhowr daqiiqadood socday. Muuqaalo oo arkay GO waxay muujinayaan ciidamo gurmad ah oo sii gelaya gudaha xabsiga kadib tacshiirada.
Xogta ayaa intaas ku dareysa in uu jiro maxbuus kale oo ka baxsaday jeelka, kaasoo aan wali la ogeyn halka uu u fakaday. Saraakiishu waxay sheegeen in ay ku raadjoogaan.
Sidda laga soo xigtay Mr Cumar, ciidamadda ammaanka ayaa ku guuleystay in ay soo afjaraan howlgal ay ka sameeyeen gudaha xabsiga kadib is-rasaaseyn ay la galeen afarta maxaabiista.
"Ciidamada Amniga ayaa toogtay 4 maxbuus oo isku dayay in ay ka baxsadaan Xabsiga, waxaa jiro dhimasho iyo dhaawac soogaaray ilaalada xabsiga, xaaladda Xabsiga hadda waa mid daggan, majiraan maxaabiis baxsatay," ayuu yiri.
Xabsiga Dhexe ee Muqdisho oo ku yaala degmada Xamarwayne ee gobolka Banaadir ah ayaa ah mid ammaankiisa aad loo adkeeyo, waxaana lagu xiraa xukumaneyaal qaarkood kamida Al-Shabaab iyo Daacish.
Falcelinta warbaahinta caalamka ee kiiska COVID-19 ee Soomaaliya
Soomaliya 16.03.2020. 19:35
Dowladda ayaa laba todobaad hakisay duulimaadyadda caalamiga ah kadib xaqiijinta kiiskii koowaad ee Corona.
Khayre oo Wasiir xilka uga qaadey muranka shirkadaha diyaardaha
Soomaliya 09.07.2018. 16:17
DF oo karan-tiileysa dadka ka yimaada dalalka laga helay Coronavirus
Soomaliya 07.03.2020. 18:00
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo digniin culus u dirtay Kenya
Soomaliya 05.02.2020. 16:00
Booliska Soomaaliya: Cabdirashiid Janan wuxuu ka baxsaday xabsiga
Soomaliya 28.01.2020. 14:21
Khayre oo joojiyey fulinta mashruuc ay malaayiin Doolar ku baxeyso
Soomaliya 18.01.2020. 17:22